(အိုလမာ)ပညာရှင်များသည် တမန်တော်များ၏ အမွေခံများဖြစ်ကြသည် (ဆရာ ဘီလာလ် ရန်နိုင် - မြောင်းမြ) - Islamic Religious Affairs Council
You are here: Home ဆောင်းပါး (အိုလမာ)ပညာရှင်များသည် တမန်တော်များ၏ အမွေခံများဖြစ်ကြသည် (ဆရာ ဘီလာလ် ရန်နိုင် - မြောင်းမြ)
(အိုလမာ)ပညာရှင်များသည် တမန်တော်များ၏ အမွေခံများဖြစ်ကြသည် (ဆရာ ဘီလာလ် ရန်နိုင် - မြောင်းမြ)
Published: 30 December 2012 | Written by ဆရာ ဘီလာလ်-ရန်နိုင်(မြောင်းမြ) | Hits: 19145
ဘာသာရေးလေးစားသည်မှာ ကောင်း၏။ ဘာသာရေးပညာကို သင်ယူဆည်းပူးသညကောင်း၏။ သို့သော်ယခုခေတ် ဘာသာရေးလေးစားသူများ ၊ဘာသာရေးပညာကို သင်ယူ ဆည်းပူး သူများ၊ ဘာသာရေးပညာတတ်များက ခေတ်ပညာများကို မသင်ကောင်းသည့်အလားထင်မြင်၊ ယူဆ ၊ဟောပြော၊ ဖြန့်ချီနေကြသည်မှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ မှတ်တမ်းများနှင့် လွဲချော်နေပါသည်။
ယခုခေတ်ပညာများသည် ယဟူဒီ/နစွာရာနီတို့၏ ပညာများမဟုတ်။ တမန်တော်သခင်များ တတ်သိခဲ့သောပညာများသာဖြစ်ကြောင်း ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် အထောက်အထားများနှင့် တင် ပြလိုက် ပါသည်။ ထင်ရှားသော ဟဒီးဆ်တော်အရ ခေတ်ပညာများကို သင်ယူဆည်းပူးတတ်ကျွမ်းလျှင် တမန်တော်သခင်များ၏ အမွေရသည်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေတင်ပြ လိုက်ပါသည်။
“အမှန်ပင် (အိုလမာ)ပညာရှင်များသည် (အန်ဘီယာ) တမန်တော်သခင်များ၏ အမွေခံများ ဖြစ်ကြသည်။ (တမန်တော်မြတ် သခင်၏ သြ၀ါဒတော် ၊ အဟ်ကားမ်ကျမ်း) သြ၀ါဒတော်များအရ တမန်တော်မြတ်သခင် ညွှန်ပြသော (အိုလမာ)ပညာရှင်များမှာ မည်သည့်(အိလ်မ်)ပညာများ တတ်မြောက်ကြသူများနည်း။ မည်သည့်တမန်တော်သခင်သည် မည်သည့်(အိလ်မ်)ပညာကို တတ်မြောက်ခဲ့သနည်း။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ထဲမှာ အဖြေရှာရပါမည်။
(၁) ဖခင်ကြီး တမန်တော် အာဒမ် သခင် (Adam)
(၂) တမန်တော် နူးဟ် သခင် (Noah)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်နူးဟ်သခင်သည် သင်္ဘောဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာ(Ship Building Engineering) နှင့် ရေကြောင်းအတတ် ပညာ (Marine Science) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
(၃) တမန်တော် အစ်ဘရာဟီးမ် သခင် (Abraham)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းများအရတမန်တော် အစ်ဘရာဟီးမ်သခင်သည် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ (Civil Engineering) ၊ လျှောက်လဲပြော ဆိုတတ်သော အတတ်ပညာ (Argumentation) ၊ စကားပြော/ တရား ဟော အတတ်ပညာ(Eloquent Art/Preaching Art) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
(၄) တမန်တော် အစ္စမာအီးလ် သခင် (Ismail)
(၅) တမန်တော် ယူစွဖ် သခင် (Joseph)
(ယူစွဖ်က) (အရှင်မင်းကြီးသည်) ကျွန်ုပ်အားတိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာတော်များအပေါ်၌ (ကြီးကြပ်အုပ်ထိန်းသူအဖြစ်) ခန့်အပ်ပါလေ၊ အမှန်ပင်ကျွန်ုပ်သည် ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ၊အသိပညာနှင့် ပြည့်စုံသူဟု ပြောခဲ့လေ၏။(၁၂း၅၅)
(၆) တမန်တော် မူစာ သခင် (Moses)
-…၄င်းပြင်သူ(မူစာ) ဥာဏ်အမြော်အမြင်နှင့်အသိ ပညာကိုပေးခဲ့၏။
- . . .(မူစာက) ဟဲ့ (တရားခံ) စာမရီ၊မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ . . . (၂၀း၉၅)
-…(မူစာက)(တရားခံစာမရီအား)သင်ထွက်သွား၊သင်သည် ဤဘ၀တွင်မည်သူနှင့်မျှ ထိတွေ့ခြင်းမရှိရဟု ပြောရမည်ဟု (စီရင်ချ က်ချမှတ်)ပြောခဲ့သည်။ . . .(၂၀း၉၇)
(၇) တမန်တော် ဟာရူန် သခင် (Aron)
(၈) တမန်တော် ဒါဝူးဒ် သခင် (David)
- ၎င်းပြင် ငါအရှင်သည် ဒါဝူးဒ်အား သင်တို့အကျိုးငှာသံချပ်အင်္ကျီပြုလုပ်သော အတတ်ကိုသင်ပေးခဲ့၏။ သင်တို့စစ်တိုက် ရာတွင် သင်တို့ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။. . .(၂၁း၈၀)
- . . .အမှန်ပင်ငါအရှင်သည် ဒါဝူးဒ်အား မိမိထံမှ ကျေးဇူးတော်ကို ပေးသနားခဲ့၏။အိုတောင်တို့ အသင်တို့သည် ဒါဝူးဒ်နှင့်အတူ ငါအရှင်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းတော်မူကြောင်း သီဆိုကြ၊ ထို့အတူငှက်များလည်း(သီဆိုကြ)၊ထို့ပြင် ဒါဝူးဒ်အဖို့ ငါအရှင်သည် သံကို ပျော့ပျောင်းစေတော်မူ၏။
(၉) တမန်တော် စုလိုင်မာန် သခင် (Solomon)
. . .၎င်းတို့သည်(စုလိုင်မာန်၏)အကျိုးငှာ ၎င်းအလိုရှိသောအဆောက်အအုံများ၊ရုပ်တုများ၊ရေကန်ကြီးများတမျှရှိ ဇလုံ၊အင်တုံ များ၊မပြောင်းမရွှေ့နိုင်သောအိုးကြီးများကို လုပ်ပေးကြသည်။ . . .(၃၄း၁၃)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရတမန်တော် စုလိုင်မာန်သခင်သည် အုပ်ချုပ်မှုအတတ်ပညာ(Administrative Art) တရားစီရင်ရေးအတတ်ပညာ (Judicial Art)၊ဘာသာ စကားအတတ်ပညာ(Linguistic)၊စစ်ပညာ(Military Art)၊ သံတမန်အတတ်ပညာ(Diplomacy)၊လေကြောင်းအတတ်ပညာ(Aeronautical) ၊ဗိသုကာ(Architecture)၊မြို့ ပြအင် ဂျင်နီယာ အတတ်ပညာ(Civil Engineering) ၊ ပန်းပုအတတ်ပညာ(Sculpture) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
(၁၀) တမန်တော် ဟူးဒ် သခင် (Hud)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်ဟူးဒ်သခင်၏အမျိုးအနွယ်အားဒ်လူမျိုးတို့သည် ဗိသုကာ အတတ်ပညာ (Architecture) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
(၁၁) တမန်တော် ဆွာလိဟ် သခင် (Salih)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းများအရတမန်တော် ဆွာလိဟ်သခင်၏အမျိုးအနွယ် ဆမူးဒ်လူမျိုးတို့သည် ဗိသုကာ အတတ်ပညာ(Architecture) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
(၁၂) တမန်ကော် ဇွလ်-ကရ်နိုင်းန် သခင်
- အမှန်ပင်ငါအရှင်သည်(ဇွလ်-ကရ်နိုင်းန်)အားကမ္ဘာမြေ၀ယ်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ ပေးခဲ့၏။ထို့ပြင်ငါအရှင်သည် ၎င်းအား (ဥစ္စာ ပစ္စည်းလက်နက်ကိရိယာ)အမျိုးမျိုးကိုချီးမြှင့်ခဲ့၏။. . .(၇း၇၄)
- သို့ဖြစ်ပေရာ ၎င်းသည် လမ်းတစ်ခုကို လိုက်ခဲ့သည်။. . .(၁၈း၈၅)
- ငါအရှင်သည် အိုဇွလ်-ကရ်နိုင်းန် ၊ သင်သည်၎င်းတို့အားပြစ်ဒဏ်ခတ်နိုင် ၊ ထောက်ထားညှာတာနိုင်၊(ကြိုက်ရာပြုနိုင်) သည်။. . .(၁၈း၈၆)
- . . .ယင်းတောင်နှစ်လုံးကြားတွင်စကားနားမလည်နိုင်သော လူမျိုးတစ်မျိုးကိုတွေ့ခဲ့သည်။(၁၈.၉၃)
- . . .ကျွန်ုပ်သည်သင်တို့နှင့် ၎င်းတို့အကြားဝယ်အလွန်ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော တံတိုင်းကို ပြုလုပ်ပေးမည်။(၁၈း၉၅)
- . . . (အရည်ကျိုထားသောကြေးနီကို)ကျွန်ုပ်ထံယူခဲ့ကြ ၊ဤသံပြားပေါ်၌ကျွန်ုပ်သွန်းလောင်းအံ့။(၁၈း၉၆)
- . . .(ဇွလ်-ကရ်နိုင်းန်က)ဟောကြားခဲ့သည်မှာ -မည်သူမဆိုမတရားပြုမြဲပြုနေက . . ။(၁၈း၈၇)
- ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်ဇွလ်-ကရ်နိုင်းန်သခင်သည် အုပ်ချုပ်ရေးအတတ်ပညာ (Administrative Art)၊ ခရီးသွားအတတ်ပညာ (Tourism)၊စစ်ပညာ (Military Art)၊ ဘာသာစကားအတတ်ပညာ(Linguistic)၊ ဆောက်လုပ်ရေးအတတ်ပညာ(Civil Engineering)၊သတ္တုအင်ဂျင်နီယာ အတတ်ပညာ (Metal Engineering)၊ဟော ပြောမှုအ တတ်ပညာ(Preaching Art) တို့ကို တတ်သိခဲ့သည်။
(၁၃) တမန်တော် ဇက္ကရီယာ သခင် (Zakria)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော် ဇက္ကရီယာသခင်၏ သားသမီးမွေးမြူစောင့်ရှောက်နည်းအတတ်ပညာ(Child caring Art) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
(၁၄) တမန်တော် အီစာ သခင် (Jesus)
(၁၆) တမန်တော်ချုပ် မုဟမ္မဒ် သခင် (Muhammad)
ငယ်စဉ်ဘ၀တွင် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး အတတ်ပညာ(Husbandry) ၊ ရေကူးအတတ်ပညာ(Swimming)၊ စစ်သတင်း/လက်နက် စုဆောင်းမှုအတတ်ပညာ(Military Art)တို့ကိုတတ် သိခဲ့သည်။
ထိုသို့ဤသို့သော အထောက်အထားများအရ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင် (Major) အထူးပြုဘာသာရပ်အသီးသီး အ လိုက်သင်ကြားပေးနေသော- ဆေးတက္ကသိုလ်များ (Universities of Medicine) နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ (University of Technology) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးနှင့်မွေးမြူရေးတက္ကသိုလ် (University of Veternary and Husbandary) စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် (University of Agriculture) ၊(တမန်တော်ချုပ်၏ အန်စွာရီအဆွေတော်များတတ်သိခဲ့သောအတတ်ပညာ) ရေ ကြောင်း(အင်ဂျင်နီယာ)တက္ကသိုလ်(University of Marine (Engineering) Science) -လေကြောင်း တက္ကသိုလ် (University of Aeronaurtical) -စိးပွားရေးတက္ကသိုလ် (University of Economics) -သူနာပြုတက္ကသိုလ် (University of Nursing) [တမန်တော်ချုပ်၏ဇနီး အာအိရှာ သခင်မကြီး တတ်သိခဲ့သည်။
စစ်တက္ကသိုလ် (Defence Service Accedamy) ပညာရေးတက္ကသိုလ် (University of Education) ဥပဒေ၊၀ိဇ္ဇာ-သိပ္ပံများ သင်ပေးသောတက္ကသိုလ်၊ဒီဂရီကောလိပ်(များ) (Arts and Science Universities) အုပ်ချုပ်ရေး ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ၊ စစ်ပညာ ၊ ဥပဒေပညာရပ်များ သင်ကြားပေးခဲ့သောဖောင်ကြီးကဲ့သို့သင်တန်း ၊ လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းများ အိမ်တွင်းမှုသိပ္ပံ ၊ အားက စား သိပ္ပံ စသည်တို့တွင် သင်ကြားပေးနေသော ခေတ်မီပညာရပ်များမှာ တမန်တော်သခင်များ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ခဲ့သော အတတ်ပညာရပ်များပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဟုဟောကြားထားရာ ခေတ်တ္ကသိုလ်များမှပေးနေသော ခေတ်ပညာများမှာလည်း တမန်တော်သခင်များ၏ပညာအမွေများပင် ဖြစ်၍မွတ်စလင်မ်လူငယ်များ မရ ရအောင်ယူရန် တာဝန်ရှိပါသတည်း။
ခေတ်ပညာတတ်မှ ဤလောက၌လှပတင့်တယ်မည်ဖြစ်သည်။ဘာသာရေးပညာတတ်မှ တမလွန်လောက၌ လှပတင့်တယ်မည်ဖြစ်သည်။ တတ်သောပညာကို လက်တွေ့အသုံးချမှ ပူပန်သောကကင်းဝေးရမည်ဖြစ်သည်။
ခေတ်ပညာမှာ အစ္စလာမ်နှင့်ဆန့်ကျင်သော အရာမဟုတ်။အစ္စလာမ်၏ တမန်တော်သခင်များတတ်သိခဲ့သော အရာသာဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်ကိုချစ်လျှင်၊ တမန်တော်သခင်များကိုချစ်လျှင် ခေတ်ပညာ(များ)လည်း တတ်သိလိမာအောင် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ရမည်သာဖြစ်ပါတော့သည်။
Tin Mg Than and 41 other friends like this.
Sithu Htun Win and 48 other friends like this.
Committee For Freedom of Press (My...
Djkoko Aung and 15 other friends like this.
Myanmar Muslims' Voice (မြန်မာမွတ်...
Lwin Thandar Soe and 214 other friends like this.
Nay Oo Lwin and 70 other friends like this.
Tin Mg Than and 28 other friends like this.
Aung Myo Lwin Agga and 96 other friends like this.
by Myo Tint Than on Monday, June 25, 2012 at 5:08pm ·
ဘာသာရေးလေးစားသည်မှာ ကောင်း၏။ ဘာသာရေးပညာကို သင်ယူဆည်းပူးသည်မှာလည်း ကောင်း၏။ သို့သော်ယခုခေတ် ဘာသာရေးလေးစားသူများ ၊ဘာသာရေးပညာကို သင်ယူ ဆည်းပူးသူများ ၊ ဘာသာရေးပညာတတ်များက ခေတ်ပညာများကို မသင်ကောင်းသည့်အလား ထင်မြင်၊ယူဆ ၊ဟောပြော၊ ဖြန့်ချီနေကြသည်မှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ မှတ်တမ်းများနှင့် လွဲချော်နေပါသည်။
ယခုခေတ်ပညာများသည် ယဟူဒီ/နစွာရာနီတို့၏ ပညာများမဟုတ်။ တမန်တော်သခင်များ တတ်သိခဲ့သောပညာ များသာဖြစ်ကြောင်း ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် အထောက်အထားများနှင့် တင် ပြလိုက်ပါသည်။ ထင်ရှားသော ဟဒီးဆ်တော်အရ ခေတ်ပညာများကို သင်ယူဆည်းပူးတတ်ကျွမ်းလျှင် တမန်တော်သခင်များ၏ အမွေရသည်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေတင်ပြ လိုက်ပါသည်။
- သို့ဖြစ်ပေရာ ၎င်းသည်လမ်းတစ်ခုကိုလိုက်ခဲ့သည်။. . .(၁၈း၈၅)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော် ဇက္ကရီယာသခင်၏ သားသမီးမွေးမြူစောင့်ရှောက်နည်းအတတ်ပညာ (Child caring Art) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
ထိုသို့ဤသို့သော အထောက်အထားများအရ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင် (Major) အထူးပြုဘာသာရပ်အသီးသီး အ လိုက်သင်ကြားပေးနေသော- ဆေးတက္ကသိုလ်များ (Universities of Medicine) နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ (University of Technology) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးနှင့်မွေးမြူရေးတက္ကသိုလ် (University of Veternary and Husbandary) စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် (University of Agriculture) (တမန်တော်ချုပ်၏ အန်စွာရီအဆွေတော်များတတ်သိခဲ့သောအတတ်ပညာ) ရေ ကြောင်း(အင်ဂျင်နီယာ)တက္ကသိုလ် (University of Marine (Engineering) Science) -လေကြောင်းတက္ကသိုလ် (University of Aeronaurtical) -စိးပွားရေးတက္ကသိုလ် (University of Economics) -သူနာပြုတက္ကသိုလ် (University of Nursing) [တမန်တော်ချုပ်၏ဇနီး အာအိရှာ သခင်မကြီးတတ်သိခဲ့သည်။
ခေတ်ပညာမှာ အစ္စလာမ်နှင့်ဆန့်ကျင်သော အရာမဟုတ်။အစ္စလာမ်၏ တမန်တော်သခင်များတတ်သိခဲ့သော အရာသာဖြစ် သည်။ အစလာမ်ကိုချစ်လျှင်၊ တမန်တော်သခင်များကိုချစ်လျှင် ခေတ်ပညာ(များ)လည်း တတ်သိလိမာအောင် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ရမည်သာဖြစ်ပါတော့သည်။
2014-09-10 - အစ္စလာမ့်စာပေပညာရှင်များဂုဏ်ပြုပွဲ(၁၂-၂-၂၀၁၀)